ILKAAN SOCHA’EE, BUQQISUUTU FURMAATA !!! | QEERROO
Posted on January 8, 2018 by Qeerroo
Shirri Umurii dheereffannaa wayyaanee itti fufeera. Gamaagamni wayyaanee turban sadiif gaggeeffamee, Ibsa kennameen ka ibsamuu miti. Faallaa ta’uu mala. Waggaa 27 keessatti yeroo jalqabaaf ,gamaagama guyyaa 20 olii gaggeeffatan. Gamaagama kana ka dheeressee ,sagantaa ykn ajandaa durumaan qabatan irraati moo , waan haaraa isaan mudateen dheeratee ? kun ilaalamuu qaba. Ihaadeeg turban tokko caalaaf gamaagama taa’ee hin beeku. Guyyaa 20 ol fudhachuu isaatti isaanuu hin gammannee. Garuu sagantaa durumaan itti yaadan ykn gamaagama gadi fageenyaa gaggeessuu barbaannee jedhanii isaanu dubbatan akka hin taanee,waan nu argisiisuu waa hedduutu jira. Akka kiyyatti, walga’iin guyyaa 21 kun waan nu akeeku qaba .
Gaaffii Ummataa kanaaf deebii laachuun dirqii itti ta’ee, akkaataa dantaasaaniin deebii kennuuf irratti hojjataa turan. Kanarrattis waliigalteen dhibee yeroo akka fudhatee fi gaaffii Ummataa guutummaatti deebifnaan wayyaaneef dhumachuu waan ta’eef, kan amma ammaatti deemanirra xiqqoo gadhiisanii deemuu fi adeemsa kanarratti murteessuuf yeroo itti fudhachuu,
Waan hanga Filannootti isaan adeemsiisuu danda’an tartiiba qabsiifachuu, Waan umamee kanatti dhimma ba’uuf yaaduu,
Ummatatti ba’anii wal saaxiluurra, achumatti hanga danda’an wal irraa galchanii ,walillee sukkumanii , Ummata biratti qaana’uurra waan irra dibaa qabatanii ba’uuf yaaluu, akkasumas sirna dhumateef lubbuu qabeessa fakkeessuuf halluu dibanii asi ba’uuf irratti hojjachuu…
Hiwaatoonni waanirragalagaluufjiruhubachuun, waan jiru qabbaneessanii dhimma itti ba’uuf, akka bishaan galaanaa suuta waa hundaatti fayyadamuuf shira dhokisaa gaggeessuu,
Ummata akka abidda saafaa itti deemaa jiru qabbaneessuuf shiroota adda addaa qopheessaa turuu
Ihaadeeg dhabamnaan waa hundi baduu akka maluutti walii galanii wal baraaruuf mala malachaa turuu fi adeemsi jaarsummaa adda addaa akka jiru nu akeeka.
Qabxiilee kana mirkaneessuu ka dandeenyu, wal ga’ii xumurree jedhan booda waan raawwatan kaasuu dandeenya. Innis :-
Waggaa 27 booda ibsi baasanii fi bara 1993 faa’aa ka baasaa turan tokkuma. Waggaa 27 boodallee ibsa fuula 7 baasuun dhiphina keessa jiraachuu argisiisa.ummata amansiisuuf waa hedduu keessa naqan.
Jechoonni itti fayyadaman hundisaa rakkoo keessa isaanii jiru, torban lama waan irratti mari’atan akka walitti qabachuu dadhaban, kan irratti mari’atan osoo hin taanee Ummatuma fudhachiisuuf waan qophaa’ee fakkaachuu,
Rakkoo Hiwaat irra ga’uu maluu hanqisuu fi olaantummaa isaanii hanga danda’anitti tikifachuuf, maqaa Ihaadeegiin ibsa baasuu mul’isa.
Ibsa waraqaan baasaniin booda deebii ummataa ilaalanii fi yaada ummataa irraa ka hubatan, Ummati abdii irraa akka hin qabnee hubatanii, dhaabbilee Ihaadeeg fidanii dhugumatti fuulleetti irratti haasofnee waliigallee jechuuf battalumatti waamuu
Miidiyaalee Mootummaa keessaa EBC qofa isayyuu Gaazexessitoota amanamoo filatanii dhiheessan. Kana malees gaaffiileen dhihaatanii fi akkaataa miidiyaa irratti itti fayyadaman gonkumaa hanga har’aatti waan godhamee hin beekneedhaa.
Anga’oonni 4n kun mannii gaaffii fi deebii keessatti gaggeessan, guutummaatti gidaarriisaa siidaa Akisumiin kan faayameedhaa. Kun shiraa fi dalgaa eenyuu akka ta’ee beekamaadhaa. Olaantummaan Tigiree hin jiru jechaa, siidaa Tigiree jala taa’aanii haasa’an.
Qabxiileen kunniin ,Ihaadeeg gamaaggama koo gaggeeffadhee haa jedhuu malee, keessa isaatti waan ukaamsee akka jiru, ani jira jechuuf akka yaalaa jiru mul’isan. Adeemsi kun fagoo mitii .waan wal hubannee irratti wal amannee jedhan deebi’ee diigamuun fagoo mitii.
Ibsii Anga’oota Ihaadeeg 4n kennamee ,maalii ? waan haaraa maal qaba ? kanallee ilaallachuun dansaadhaa. Akka ibsaatti waan haaraan yoo jiraatee, Maa’ikaaawwii cufnaa ka jedhu qofaadhaa.Anga’oonni hundinuu gorfamanii dhufuu akkaataa itti dubbatanii fi of eeggannoo taasisanirraa beekama. Haa ta’uutii ibsi kun kaayyoon isaa maalii ? dhuguma gamaagama booda ibsa kennamumoo, dirqamatu keessa jira ?kaayyoon Ibsa kanaa waliigalatti umuri dheereffannaa wayyaaneef ka yaadamee malee, Ummatootaaf yaadamee akka hin taanee beekuu barbaachisa. Kaayyoon Ibsa kanaa fi waan ibsa kana keessatti dubbatamee hundii ,walga’ii Ihaadeeg xumuramuu ilaalchisee osoo hin taanee, Ihaadeeg addatti hiwahaat rakkoo hamaa keessa jiraachuu ka mul’isuudhaa. Ibsa kana keessatti abshaalummaa jiru haa ilaalluu.
Qabsoon Ummatootaa addatti ka Oromoo sadarkaa lubbuun dhabamurraan ga’uu. Kanas dhaabuuf bifa adda addaan yaalanii waan dadhabaniif, afuura baafannaaf gaaffiilee Ummataa deebisuuf jedhanii qoosuu
Humnoonni alaa wayyaanee irraa abdii dhabaa dhufuu fi investimantiin isaanii rakkoo seenurraa, akeekkachiisa ittin ga’aa jiraniif deebii fakkeessaa qopheessuuf
Dhaabbileen Mormitootaa qabsoo hidhannaa gaggeessaa jiran raga kanarra caaluu akka hin arganneef, isaaniin alumatti dhiisanii, warra biyya keessa jiran waliin Filannoo itti aanuu gaggeessuuf haala mijeeffachuuf,
Qabeenyaa fi Lammiilee Tigiraayi irratti jibbii jiru haalaan jabaachaa dhufurraa, Biyyuma keessatti Araaraa fi jaarsummaa karuma Maanguddootaa xumuruuf haala mijeessuuf.
Warra alaa biratti mirgi dhalanamaa eegamaa jechuuf, maa’ikalaawwii cufnee jechuu,
Hidhamtoota Siyaasaa lakkisuun yaadaa fi qalbiin Ummataa warra ala jirurraa kanneen hiikamanitti akka deebi’uu taasisuuf hojiirra jiraachuu isaanii ,
Karaa danda’aniin waan hundaa Ihaadeeg osoo jiruu akka raawwatamuuf, badii qabnaa jedhanii amananii Ummatii carraa biraa akka laatuuf karaa cirachaa jiraachuu argina.
Ibsa kana keessatti wanni nama gaddisiisuu, Bara Dargii wayyaanoonni Bosonatti akka yaa’aan ka taasisee yakka maa’ikalaawwii keessaatii. Yakka kana bara 1992 hin dubbannee. Han gahar’aattis hin dubbannee.. Garuu warra gumaa waan turaniif waggaa 27 guutuu waan nuuti arginee argaa jedhanii addatti ilmaan Oromoo irratti ijaa ba’aa jiraatanii , har’aa cufnee jedhanii akka hojii gootummaatti ibsachuuisaaniitii. Inni kaan, Obbo mallasii fi Sibahaati Ummata keenya qabsoof ka kaasee miidhaadhaa jedhanii, miidhaan kuufamee akka dhohuu dubbachaa turan. Waggaa 12 dura. Har’as Anga’oonni kun dabalaa jiru. Miidhaa kana eenyuutu raawwachaa jira ? ega miidhaan jiraachuu beekanii maaliif hin furree ? kun hedduu nama gaddisiisa. Ummatoota irratti qoosaa jiran. Abshaalummaa Ibsa Anga’ootaa qabxiilee dhugeessan ,
Maa’ikalaawwii cufuu : kun Ummataaf yaadamee miti. Qalbii warra alaa hatuuf hojjatamee. Ummataaf akka hin taanee ka beekamuu, wayyaaneen waan achi keessatti raawwattuu hundaa bakkatti raawwattu ijaartee fixxeettii. Kanaaf dhaabbilee mirga dhala namaa qalbi hatuuf dubbatan
Dirree Dimokiraasii bal’isuuf murteessinee :kunis Ummataaf jedhamee miti. Ministeerrii dhimma alaayyuu kanatti hirkifatee ibsa baaseen, walitti dhufeenye Biyyoota alaa walin qabnuu nu jabeessaa jedheera. Dhaabbilee mormitootaa yoo hirmaachiftan malee jedhanii kanneen isaan qaban jiru jechuudhaa. Kanaaf haasaan kun dhaabbilee mormitootaa Biyya keessaaf barcuma laachuuf 2020 tti qophiin ihaadeeg akka jiru argisiisa.
Hidhamtoota Siyaasaa hiikuu : kun Dirqamaan ka gaggeeffamuudhaa. Gaaffii Ummataatis. Garuu waan kanatti dhimma ba’uu barbaadu. Warra ala jirurra warra hiikaman kana faana Ummati akka hiriiree Dimokiraasii isaan nuuf kanneen akka mirkaneessan itti fayyadamuuf yaadaniiru.
Olaantummaa Ummata Tokkotu jiraa : kun wayyaaneef soda guddaadhaa. Qabsoon ummataa garatti deemaa jiru hubatanii ,karaa barbaadameen ofirraa qabbaneessuu akka barbaadan mul’isa.
Gaaffii Ummataa deebisuu :gama kanaan ka dubbatamee hundisaa waggaa 26 dubbatamaa ka tureedhaa. Isaanuu nuffanii jiru. Haata’uu gaaffiin gaafatamee deebii argachuu dhabnaan maal akka dhalchuu danda’uu hubatanii deebii afuura yeroof baafachiisuu lafa kewwatanii jiru.
Ihaadeeg Tapha kana taphataa jiraa, nuuti woo maal goona ? ammatti qabsoo itti jirru irraa eenyullee duubatti akka hin jennee !! isa hafee kutaa 2ffaatti itideebina.